Farmaajo oo dacwad ku furay dad Soomaali iyo Ajaanib isugu jira - WardheerNews
Farmaajo oo dacwad ku furay dad Soomaali iyo Ajaanib isugu jira
Muqdisho (WDN)- Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa soo saartay amar loogu yeedhayo 6 qof oo isugu jira Soomaali iyo Ajaanib, oo la sheegay in loo heysto fal dambi la xiriira faafinta xogaha amniga Qaranka iyo sameynta Basaasid siyaaasaddeed. Dadkaasi ayaa lagu amray in ay yimaadaan Maxkamadda tariikhdu markay tahay 29-05-2021.
Lama sheegin cidda ku soo oogtay fal dambiga, balse waxaa lagu amray in ay yimaadaan maxkamadda, si ay isku difaacaan. Dad badan ayaa farta ku fiiqaya taliyaha Nabad-sugida in uu ka dambeeyo dacwadda, iyada oo dad badan oo liiska ku jiraa ay wax badan ka qoraan arimaha Soomaaliya iyo tacadiyada maamulka Farmaajo.
Dadkaas waxaa ka mid ah:
1) Rashiid Xasan oo horey uga tirsanaa hay’adda – International Crisis Group ( ICG) , islamarkaana wax badan ka qora arimaha Soomaaliya iyo
2) Matt Bryant oo ahaa aasaasihii Hay’adda Cilmi Baarista ee Sahan (Sahan Research), horeyna uga tirsanaa Guddiga Qaramada Midooby u qaabilsanaa – Dabagalka Cunaqabataynta Hubka wadamada Soomaaliya iyo Eritrea.
Warqada Maxkamadda ayaa u qorneyd sida hoos ku xusan: